विवादमा परेको 'कबीर सिंह' वर्षकै... :: एजेन्सी :: Setopati
विवादमा परेको 'कबीर सिंह' वर्षकै धेरै कमाइ गर्ने फिल्म
एजेन्सी मुम्बई, असार २५
शाहिद कपुरको फिल्म 'कबीर सिंह' यो वर्षकै सबभन्दा धेरै कमाउने फिल्म बन्ने भएको छ। रिलिजको उन्नाइसौं दिन (मंगलबार)सम्म फिल्मले दुई सय ४४ करोड भारू हाराहारी कमाइसकेको छ।
बुधबारसम्म यसको कमाइले विक्की कौशलको 'उरी' लाई उछिन्दै सन् २०१९ मै धेरै कमाउने फिल्म बन्ने पक्का भएको बलिउड फिल्म समीक्षक तरन आदर्शले जनाएका छन्। रिलिजको तेस्रो सातासम्म पनि बक्स अफिसमा राम्रै छाप पारिरहेको 'कबीर सिंह' ले कमाइमा नयाँ रेकर्ड राख्ने अनुमान गरिएको छ।
अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष सबभन्दा धेरै कमाउने फिल्म 'उरी' हो। यसले दुई सय ४६ करोड भारू हाराहारी कमाएको छ। तर 'कबीर सिंह'को रफ्तारले 'उरी'लाई पछि पार्ने पक्का भएको छ।
'कबीर सिंह' यस वर्ष सबभन्दा चाँडो दुई सय करोड कमाउने पहिलो फिल्म पनि हो। योसँगै अहिलेसम्मै धेरै कमाउने दस हिन्दी फिल्मको सूचीमा पनि यो फिल्म परेको छ।
'कबीर सिंह' ले यो वर्ष सलमान खानको'भारत' लाई समेत उछिनेको छ। तरन आदर्शका अनुसार कबीर सिंहले १३ औं दिनमा दुई सय कमाउँदा 'भारत'ले १४ औं दिन र 'उरी'ले २८ औं दिनमा कमाएको थियो।
यो कमाइसँगै 'कबीर सिंह' शाहिदको पहिलो सोलो हिट हो। साथै फिल्म यो वर्षकै 'नम्बर एक हिट' सावित भएको छ।
विभिन्न विवाद र आलोचनाका बाबजुद 'कबीर सि‌ंह' हिट हुन सफल भएको हो। फिल्ममा शाहिदको भूमिका र पेशा (चिकित्सक) सँग जोडेर केहीले आपत्ति पनि जनाएका छन्। त्यस्तै फिल्मका नायकले आफ्नी प्रेमिकाप्रति देखाएको व्यवहारबारे पनि खुबै आलोचना भयो। फिल्मका निर्देशक सन्दीप वांगाले 'प्रेममा यी कुरा जायज हुन्छन्' भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि टिकाटिप्पणी झनै तन्किएको छ।
तै फिल्मको व्यापारमा कुनै प्रभाव पारेन।
'कबीर सिंह' तेलेगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी'को आधिकारिक हिन्दी 'रिमेक' हो। फिल्ममा शाहिद कपुर र कियारा अडवाणी प्रमुख भूमिकामा छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २५, २०७६, १३:४५:००
सलमान-अक्षयलाई आफ्नो सिनेमा गर्न यसरी मनाउँछन् यी निर्देशक
'मि टु' आरोपमा अनुः अनुहार हँसिलो भएपनि भित्र पीडामा छु
'हाउसफुल-४'ले कमायो दुई सय करोड, बनायो यस्तो रेकर्ड
किन छोरीको मायापिरतीबाट बेखुश छिन् साराकी आमा?
यी हुन् एकसाथ डेब्यू गरेका कलाकारः जान्नुस् आज को कति हिट, को कति फ्लप?
यस्तो फोटो पोस्ट गरेपछि वाणीसँग रिसाए मानिसहरू